भजनसंग्रह 82 ERV-NE - आसापको एउटा - Bible Gateway
भजनसंग्रह 81भजनसंग्रह 83
भजनसंग्रह 82 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
आसापको एउटा भजन।
82 परमेश्वर अन्य देवताहरूको सभामा उभिनु हुन्छ।
उहाँ त्यस सभाको प्रमुख न्यायकर्ता हुनुहुन्छ।
2 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “तिमीहरूले कहिले सम्म मानिसहरूलाई पक्षपाती न्याय गर्नेछौ?
कहिले सम्म तिमीहरूले दुष्ट मानिसहरूलाई कुनै प्रकारको दण्ड नदिइकन छोडी दिन्छौं?”
3 “गरीब र टुहुरा-टुहरी मानिसहरूको रक्षा गर।
ती गरीब मानिसहरूका अधिकारको रक्षा गर।
4 ती गरीब र असहाय मानिसहरूलाई सहयोग गर।
दुष्ट मानिसहरूबाट तिनीहरूलाई बँचाऊ।
5 “तिनीहरू के भइरहेछ त्यो पनि जान्दैनन्।
तिनीहरू स्वयं गरिरहेका छन्, त्यो पनि बुझ्दैनन्,
तिनीहरूको संसार तिनीहरूकै चारैतिर झरी सक्यो वा झर्दै गइरहेछ!”
6 म सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्दछु,
“तिमीहरू देवताहरू, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोराहरू हौ।
7 तर तिमीहरू मर्नेछौ
जसरी अन्य अगुवाहरू मर्दछन्।”
8 हे परमेश्वर, उठ्नु होस्! तपाईं न्यायकर्ता हुनुहोस्।
तपाईं सबै जातिहरूमा अगुवा हुनुहोस्।